မြန်မာနိုင်ငံမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ PTTEP ကုမ္ပဏီ ဝယ်ယူရန် ပြင်ဆင်နေ - People Media Myanmar
Home မြန်မာနိုင်ငံမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ PTTEP ကုမ္ပဏီ ဝယ်ယူရန် ပြင်ဆင်နေ
မြန်မာနိုင်ငံမှ သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ PTTEP ကုမ္ပဏီ ဝယ်ယူရန် ပြင်ဆင်နေ
နိုင်ငံတကာ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၇ (People Media)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်က စစ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့် ပြင်သစ်အခြေစိုက်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Total ကုမ္ပဏီက မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံးသဘာဝဓာတ် ငွေ့လုပ်ငန်းကို လက်ပြောင်းဝယ်ယူရန် ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီ PTTEP က ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရသည်။
စီမံကိန်းအစုရှယ်ယာ ၂၅. ၅ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မကြာမီ ရတနာသဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရေးစီမံကိန်း၏ ပင်မအစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်လာတော့မည့် PTTEP ကုမ္ပဏီ၏ ဆောင်ရွက်မှုမှာ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ စီးဆင်း နေသော အရေးကြီးသည့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည့်အပြင် အမေရိကန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကြားတွင် မြန်မာအစိုးရ၏ ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်း ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးသွားနိုင်သည်။
စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများ ဆိုးရွားလာသဖြင့် ပြင်သစ်ပိုင် Total ကုမ္ပဏီနှင့် အမေရိကန်ပိုင် Chevron ကုမ္ပဏီတို့က ၎င်းတို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့က ကြေညာခဲ့သည်။
ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီနှင့် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သွယ်တန်းထားသည့် ပိုက်လိုင်းမှတစ် ဆင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များပို့နေသော မြန်မာနိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှ ရတနာသ ဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရေးစီမံကိန်းနှင့် မုတ္တမသဘာဝဓာတ်ငွေ့ကုမ္ပဏီတို့တွင် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေ သော အုပ်စုဖြစ်သည်။
PTTEP ကုမ္ပဏီသည် Total ကုမ္ပဏီနှင့် Chevron ကုမ္ပဏီတို့၏ အစုရှယ်ယာအားလုံးကို ဝယ်ယူလိုက်မည်ဆိုပါ က ရတနာသဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရေးစီမံကိန်း၏ အစုရှယ်ယာ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ပိုင်ဆိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။ PTTEP ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာအစိုးရပိုင် မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (MOGE) က အစုရှယ်ယာ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပိုင် ဆိုင်ထားသည့် ဇောတိကသဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ကွက်တွင်လည်း အစုရှယ်ယာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ကို ပိုင်ဆိုင်ထား သောကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
ရတနာသဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စွမ်းအင်ဖြည့် ဆည်းပေးမှုကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းအဆင့်များနှင့်ပတ်သက်၍ PTTEP ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အလေးအနက်ထား ချင့်ချိန်စဉ်းစားနေကြောင်း ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့က PTTE ကုမ္ပဏီက ပြောသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ရတနာသဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ရေးစီမံကိန်းမှ တစ်ရက်လျှင် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေ ၇၇၀ သန်းထွက်ရှိပြီး ကုဗပေ ၅၇၀ သန်းခန့်ကို ထိုင်းနိုင်ငံသို့ထောက်ပံ့ကာ ကျန်သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်ထက်ဝက်ခန့်အတွက် ဖြည့်ဆည်းသုံးစွဲနေသည်။ ရတနာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ တူးဖော်ရေးစီမံကိန်းမှ ထွက်ရှိသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့များမှာ ထိုင်းနိုင်ငံသဘာဝဓာတ်ငွေ့ လိုအပ်ချက်၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ဖြည့်ဆည်းပေးနေကြောင်းသိရသည်။
Ref: Thailand’s PTTEP seen taking over big Myanmar gas field as majors exit
မွနျမာနိုငျငံမှ သဘာဝဓာတျငှေ့လုပျငနျးကို ထိုငျးနိုငျငံမှ PTTEP ကုမ်ပဏီ ဝယျယူရနျ ပွငျဆငျနေ
နိုငျငံတကာ၊ ဇနျနဝါရီ ၂၇ (People Media)
မွနျမာနိုငျငံတှငျ လှနျခဲ့သည့ျနှဈက စဈအာဏာသိမျးမှုကွောင့ျ ပွငျသဈအခွစေိုကျစှမျးအငျကုမ်ပဏီဖွဈသော Total ကုမ်ပဏီက မွနျမာနိုငျငံမှ ထှကျခှာသှားရနျဆုံးဖွတျလိုကျသဖွင့ျ မွနျမာနျိုငျငံ၏ အကွီးဆုံးသဘာဝဓာတျ ငှေ့လုပျငနျးကို လကျပွောငျးဝယျယူရနျ ထိုငျးနိုငျငံအခွစေိုကျ ရနေံနှင့ျ သဘာဝဓာတျငှေ့ရှာဖှရေေးကုမ်ပဏီ PTTEP က ပွငျဆငျနကွေောငျးသိရသညျ။
စီမံကိနျးအစုရှယျယာ ၂၅. ၅ ရာခိုငျနှုနျးပိုငျဆိုငျထားပွီး မကွာမီ ရတနာသဘာဝဓာတျငှေ့တူးဖောျရေးစီမံကိနျး၏ ပငျမအစုရှယျယာရှငျဖွဈလာတော့မည့ျ PTTEP ကုမ်ပဏီ၏ ဆောငျရှကျမှုမှာ ထိုငျးနိုငျငံနှင့ျ မွနျမာနိုငျငံသို့ စီးဆငျး နသေော အရေးကွီးသည့ျသဘာဝဓာတျငှေ့ထောကျပံ့ရေးလုပျငနျးကို ဆကျလကျလုပျဆောငျသှားမည့ျအပွငျ အမရေိကနျနှင့ျ အခွားနိုငျငံမြား၏ စီးပှားရေးပိတျဆို့မှုမြားကွားတှငျ မွနျမာအစိုးရ၏ ဘဏ်ဍာရေးအကပြျအတညျး ကိုလညျး ကာကှယျပေးသှားနိုငျသညျ။
စဈအာဏာသိမျးပွီးနောကျ လူ့အခှင့ျအရေးအခွအေနမြေား ဆိုးရှားလာသဖွင့ျ ပွငျသဈပိုငျ Total ကုမ်ပဏီနှင့ျ အမရေိကနျပိုငျ Chevron ကုမ်ပဏီတို့က ၎င်းငျးတို့ မွနျမာနိုငျငံမှ ထှကျခှာသှားတော့မညျဖွဈကွောငျး ဇနျနဝါရီလ ၂၁ ရကျနေ့က ကွညောခဲ့သညျ။
ပွငျသဈကုမ်ပဏီနှင့ျ အမရေိကနျကုမ်ပဏီသညျ မွနျမာနိုငျငံမှ ထိုငျးနိုငျငံသို့ သှယျတနျးထားသည့ျ ပိုကျလိုငျးမှတဈ ဆင့ျ သဘာဝဓာတျငှေ့မြားပို့နသေော မွနျမာနိုငျငံအနောကျတောငျဘကျ ကမျးလှနျပငျလယျပွငျမှ ရတနာသ ဘာဝဓာတျငှေ့တူးဖောျရေးစီမံကိနျးနှင့ျ မုတ်တမသဘာဝဓာတျငှေ့ကုမ်ပဏီတို့တှငျ လုပျငနျးမြားဆောငျရှကျနေ သော အုပျစုဖွဈသညျ။
PTTEP ကုမ်ပဏီသညျ Total ကုမ်ပဏီနှင့ျ Chevron ကုမ်ပဏီတို့၏ အစုရှယျယာအားလုံးကို ဝယျယူလိုကျမညျဆိုပါ က ရတနာသဘာဝဓာတျငှေ့တူးဖောျရေးစီမံကိနျး၏ အစုရှယျယာ ၈၅ ရာခိုငျနှုနျးကို ပိုငျဆိုငျသှားမညျဖွဈသညျ။ PTTEP ကုမ်ပဏီသညျ မွနျမာအစိုးရပိုငျ မွနျမာ့ရနေံနှင့ျ သဘာဝဓာတျငှေ့လုပျငနျး (MOGE) က အစုရှယျယာ ၂၀ ရာခိုငျနှုနျးပိုငျ ဆိုငျထားသည့ျ ဇောတိကသဘာဝဓာတျငှေ့လုပျကှကျတှငျလညျး အစုရှယျယာ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျး ကို ပိုငျဆိုငျထား သောကုမ်ပဏီဖွဈသညျ။
ရတနာသဘာဝဓာတျငှေ့တူးဖောျရေးစီမံကိနျးလုပျငနျးမြား၊ ထိုငျးနိုငျငံနှင့ျ မွနျမာနိုငျငံအတှကျ စှမျးအငျဖွည့ျ ဆညျးပေးမှုကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးရနျ ဆကျလကျဆောငျရှကျရမည့ျလုပျငနျးအဆင့ျမြားနှင့ျပတျသကျ၍ PTTEP ကုမ်ပဏီအနဖွေင့ျ အလေးအနကျထား ခငြ့ျခြိနျစဉျးစားနကွေောငျး ဇနျနဝါရီလ ၂၁ ရကျနေ့က PTTE ကုမ်ပဏီက ပွောသညျ။
၂၀၂၁ ခုနှဈတှငျ ရတနာသဘာဝဓာတျငှေ့တူးဖောျရေးစီမံကိနျးမှ တဈရကျလြှငျ သဘာဝဓာတျငှေ့ ကုဗပေ ၇၇၀ သနျးထှကျရှိပွီး ကုဗပေ ၅၇၀ သနျးခန့ျကို ထိုငျးနိုငျငံသို့ထောကျပံ့ကာ ကနြျသဘာဝဓာတျငှေ့မြားကို မွနျမာနိုငျငံ၏ စှမျးအငျလိုအပျခကြျထကျဝကျခန့ျအတှကျ ဖွည့ျဆညျးသုံးစှဲနသေညျ။ ရတနာ သဘာဝဓာတျငှေ့ တူးဖောျရေးစီမံကိနျးမှ ထှကျရှိသော သဘာဝဓာတျငှေ့မြားမှာ ထိုငျးနိုငျငံသဘာဝဓာတျငှေ့ လိုအပျခကြျ၏ ၁၀ ရာခိုငျနှုနျးမှ ၁၅ ရာခိုငျနှုနျးအထိ ဖွည့ျဆညျးပေးနကွေောငျးသိရသညျ။
« ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၌ နွားကျောင်းနေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး သေနတ်ဖြင့် လုပ်ကြံခံရ၍ သေဆုံး
လူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေများ ဆိုးရွားမှုကြောင့် သြစတေးလျ Woodside Petroleum ကုမ္ပဏီ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည် »